Emechiri Emechi Cooling Tower: Chemical Industry
Chemical Industry na-agụnye a usoro nke mgbagwoju Filiks dị ka Heating, Jụrụ, Condensing, evaporation na Nkewa. Chemicallọ ọrụ na-ahụ maka kemịkal bụ otu n'ime ngalaba ndị na-arụpụta ihe ọhụụ ma na-eto ngwa ngwa. Ọ gaghị arụ ọrụ na-enweghị ụlọ Igwe jụrụ oyi, ma bụrụ akụkụ dị mkpa nke Mmepụta Chemical, ebe a ga-ekpo ọkụ na mbara igwe ma ọ bụ Fluids ga-arụ ọrụ nke ọma yana obere Energy & Water loss.
Isingrị elu Ike na Mmiri na-akwụ ụgwọ na-eme ka ụlọ ọrụ Chemical Chemical na-achọ teknụzụ ọhụụ nke nwere ike ime ka azụmaahịa ahụ na-adigide ma weda ụgwọ Mmepụta.
A na-atụ anya na ọganihu na mpaghara ndị dị ka biotechnology, mkpụrụ ndụ mmanụ, teknụzụ gburugburu ebe obibi na ihe ọgụgụ isi ga-ebute ụzọ iji gboo mkpa ọdịnihu n'ụwa niile.
A pụrụ ịdabere na okpomọkụ okpomọkụ Exchanger technology maka Chemical Industry, na mụ arụmọrụ na-eweta na SPL na-ebute ụzọ. Ọnọdụ nkà na ụzụ anyị siri ike na-enye ezigbo arụmọrụEmechiri Emechi Loop Cowing Towers / Evaporative Condensers and Hybrid Coolers.
SPL ahaziri Ngwọta na Akụrụngwa na-eweta nnukwu elebara anya na arụmọrụ arụmọrụ, nkwụsi ike, nchekwa na nchekwa mmiri, n'ihi na ha na-ekwe ka ajụkwa usoro mmezi ya na obere ihe onwunwe, njikwa na ndozi nke ihe mejupụtara ụlọ elu dị jụụ ogologo oge nke oge.